Trivia - Kufamba Kwemhuri | Seymour, IN | Jackson County Vashanyi Center
Rwendo urwu rwekutyaira-rwunotungamirwa iwe mutero kune "mapurazi anorarama" uye vanhu vanovaita imwe yenharaunda dzinokosha kwazvo mudunhu medu. Iwe uchasangana nezvose kubva kune yazvino mashandiro ekurima mashandiro kune yakasarudzika diki yemhuri purazi rekare. Kuchave nemhuka zhinji dzekucherechedza mumapurazi uye munzvimbo yavo yepanyama. Mamwe evistas akanakisa uye madhiraivha anowanikwa mune ino chikamu cheJackson County.
Rwendo urwu runogona kupedzwa mumaawa akati wandei kana kuti rinogona kutora kusvika pahafu yezuva, zvinoenderana nezvido zvako uye kuti unoda kushanyira kwenguva yakareba sei.
Dzvanya pano kuti utore ruzivo rwekushanya kwekutyaira
Stuckwish Farm Musika
Iyo purazi yemhuri ine nhoroondo yakareba muJackson County uye iri mamaira manomwe kubva kuBrownstown paState Road 7. Shanyira musika wedu kuti unakirwe neese edu matsva emuno zvibereko panguva yekukohwa. Isu tinodada nekupa chibereko chitsva uye chakanakisa chetafura yemhuri yako. Kubva pamichero mitsva, yemuno yakasimwa kusvika kune uchi hwemuno nejamu, isu takufukidza. Isu tinotakurawo hunyanzvi hwemuno uye zvekushongedza zvemumba kubva munharaunda medu. Mira mukati uye ushanyire nesu uye unakirwe nezvakataurwa naJackson County, Indiana.
Dzvanya apa kushanyira webhusaiti!
Hackman Mhuri Farm Musika
6077 S. State Road 135, Vallonia, 812-358-3377, Chitubu kusvika Zhizha.
Iyo epitome yemhuri yaishandisa musika wepurazi, ichipa zvese zvaungatarisira kubva pamugwagwa wepurazi musika. Chibage, manhanga, madomasi, green beans, cantaloupe uye kunyange huchi hunogadzirwa imomo hunowanikwa pamusika, unoshandiswa nezvizvarwa zvemhuri yeHackman neshamwari. Inowanikwa pakati peVallonia neSalem, musika wepurazi uri anenge mamaira gumi kubva kuBrownstown asi inokodzera kutyaira.
Tiemeyer's Farm Musika
Inonyatso kuzivikanwa nekusingaperi uye zvegore mumwaka wese, akasiyana siyana mapundu, manhanga uye squash uye musika wekunze une michero, miriwo, zvihwitsi, jellies uye zvakawanda zvakaoma kuwana zvinhu. Iresitorendi izere nebasa inoshandira vashanyi uye inopa kudya kwemangwanani, masikati, kudya kwemanheru uye kunyange pizza! Musika unopa chimwe chinhu kune wese munhu, kubvira mapichisi uye squash yezhizha kusvika zucchini, matomatisi, mavise nemapopu nemapundu. Iko kune kunyange diki yekubata zoo uye diki gorufu kosi. Mitsva yakatemwa yeKisimusi miti uye nyowani nyowani inopihwa yezororo.
Seymour Nzvimbo Yevarimi Musika
Walnut Street Lot Yekupaka, Seymour, May kusvika Gumiguru
Zvigadzirwa uye zvinhu zvemarudzi ese zvinogamuchirwa kumusika wemwaka wemurimi mumusika weSeymour. "MarketLite" inoitwa kubva 2 pm kusvika 6 pm Muvhuro uye 8 am kusvika masikati Chitatu kubva Chitubu kusvika Kudonha uye kubva 8am kusvika masikati neMugovera munaGumiguru. Musika uzere uchaitwa kubva na8 mangwanani kusvika masikati, Chivabvu kusvika Nyamavhuvhu. Mugovera wechitatu wemwedzi wega wega, Chikumi kusvika Nyamavhuvhu, unenge uri musika chaiwo Mugovera nekuratidzira kwekubika, zviitiko zvevana, mimhanzi nezvimwe.
Brownstown Ewing Main St. Murimi Musika
Heritage Park, padyo nedare redare, June kusvika Gumiguru
Chigadzirwa uye zvinhu zvinogamuchirwa padare redare muBrownstown. Musika unoitwa Chishanu chega chega kubva na9 mangwanani kusvika na1 masikati kubva munaJune kusvika Gumiguru.
Musika weCrothersville Murimi
Gadzira uye zvinhu zvinogamuchirwa. Musika unoitwa Mugovera wega wega kubva na9 mangwanani kusvika masikati. Fonera 812-390-8217.
5875 E. Co. Rd 875N., Seymour, munzira yemigwagwa inogadzirwa.
VanAntwerp's Farm Musika
11181 N. US 31, Seymour, 812-521-9125, padivi penzira zvigadzirwa zvinogadzirwa.
Uyu musika unosanganisirawo nzira yemugwagwa paWest Tipton Street.
Roti Chikomo Dairy Farm
Mhuri ine purazi remukaka, uchigadzira machizi akasiyana siyana kusanganisira chizi chinopararira pamwe nemukaka chena uye chokoreti. Gelato inowanikwawo mumhando dzakasiyana siyana… ese akagadzirwa nemukaka kubva kudanga remombe dzemukaka Zvinhu zvinotengeswa kuMarker's Farms emunharaunda uye kubva kuchitoro chepurazi pane yavo pfuma.
Plumer uye Bowers Farmstead
Iyi 1886 imwechete-yemhuri purazi iri kushanduka kubva kune yakajairwa mutsara-chirimwa mashandiro kuita kune ese-echisikigo, ane huturu-dense yekugadzira muchina. Zvinhu zvekumapurazi zviripo zvinosanganisira huswa hwakakangwa, nyama yemombe yakapera huswa, mazai akafudzwa, hupfu hwese hwegorosi nemapopu.
Aquapon igreenhouse yemuno. Iyi purazi inopa magidhi uye tilapia kuzvitoro zvemuno, mabhizinesi, uye vatengi.
Rolling Makomo Lavender Farm
Iyi purazi inozvirumbidza nekukura kwemhando yepamusoro uye munstead lavender papurazi remhuri muCortland, IN. Kurota kwa lavender Trivia kwakatanga mu2018 uye ikozvino ivhu ravo rinogara kune zvinopfuura zviuru zviviri zvemaruva elavender. Muna 2,000, mabundles achave aripo kutenga.
Iyo Chateau de Pique Winery uye Brewery
Chateau de Pique inoratidzira kamuri yekuravira uye nzvimbo yekugamuchira munzvimbo yakanaka yegomo. Imba yekuravira inopa mahara emahara kuravira mazuva manomwe pasvondo. Matatu maeka emuchena uye mutsvuku mazambiringa anoisa chivakwa uye runyorwa rwewaini rine mhando dzinosvika makumi maviri neshanu, kubva paRiesling kuenda kuSemi-Sweets kusvika kuSweet Ports. Uye usakanganwa kuyedza doro raChateau de Pique nguva inotevera yaunoshanyira! Chateau de Pique zvakare ine satellite zvitoro mudunhu.
Chateau de Pique iri pa 6361 North County Road 760 East, Seymour, 812-522-9296.
Salt Creek Winery yakatanga mugore ra2010 sechido chemhuri yaLee. Winery iri mumakomo anotenderera eSouth Indiana uye inogumira Hoosier National Forest. Pamwe pamwe nemazambiringa mazambiringa, maLee anogadzira waini kubva kublueberries, sitirobheri, cherries, mapeya, plums uye kunyangwe mabheribheri emusango. Iyo Salt Creek Winery inogadzira merlot, cabernet sauvignon, chambourcin, Riesling, kunyura kwezuva, bheribheri, chena yakasarudzika, bheribheri yemusango, plamu, bhuruu, mango, pichisi, moscato, tsvuku inotapira, chena inotapira, Catawba uye raspibheri tsvuku.
Salt Creek Winery iri pa7603 West County Road 925 North muFreetown. 812-497-0254.
Seymour Brewing Kambani ndiyo yekutanga dhizaini yekushandisa Seymour. Mira mukati uye edza pint kana zadza muridzi wako. Rarama mimhanzi yakachengetwa nguva nenguva mu brewpub uye, kana mamiriro ekunze akanaka, nakidzwa nemimhanzi inosangana neHarmony Park. Iyo yakazara yakazara chirongwa chevanyori vanoonekwa munguva yezhizha. Mhando dzakasiyana dzedoro dziri pombi. Inowanikwa kuBrooklyn Pizza Company.
Seymour Brewing Kambani iri pa753 West Second Street, Seymour. 812-524-8888.
Driftwood Nyika Hove Hatchery
Yakavakwa pasi pePeople Projects Administration (WPA) kuma1930 ekupedzisira, ino nzvimbo inodziya yemvura ine matangi mapfumbamwe ekurera ivhu uye 9 dhamu-hove inobata dziva. Madziva ekurera anotangira pa1 kusvika ku0.6 acres muhukuru uye anopa huwandu hwakawanda hwe2.0 acres yekusimudza hove. Iyo nzvimbo inosimudza 11.6 maviri-inch bass, 250,000 mana-inch largemouth bass uye 20,000 chiteshi catfish gore rega, ayo anoshandiswa ipapo kuisira Indiana yakawanda yeruzhinji mvura.
(yakapihwa neIndiana DNR)
Driftwood State Hove Hatchery iri pa 4931 South County Road 250 West, Vallonia, 812-358-4110.
Vallonia Nursery, Chikamu cheMasango
Iyo yekucheresa chinangwa ndechekukura nekuparadzira zvemhando yepamusoro michero yezvirimwa zvekuchengetedza miti kune varidzi veIndiana. Mamiriyoni mana nehafu embeu dzinorimwa pagore kubva pamarudzi makumi matanhatu akasiyana. Iyo 60 maeka nzvimbo inogadzira ese maviri maConifers uye akaoma huni.
Vallonia Nursery, Chikamu cheMasango chiri pa2782 West County Road 540 South muVallonia. 812-358-3621
Nhoroondo ye Schneider Nursery, Inc.
Kubva paudiki, George Schneider, aive nechinangwa chimwe chete - kukura miti yekuvandudza kunaka kwenzvimbo yake. George akatanga kurima miti nemakwenzi pachiunda chidiki chaakakwereta kubva kuvabereki vake huku yekuchengetera huku nekugadzira purazi.
Mushure mekusekondari, George akaroora Mae Ellen Snyder. Iye nemukadzi wake mutsva vakatenga mahekita makumi maviri nemana kubva kupurazi remhuri ndokutanga nzvimbo yekutengesa - Schneider Nursery.
Parizvino, kireshi yacho inoumbwa neanopfuura mazana mashanu maeka epasi uye ndiyo hombe yekurera muSouth Indiana. Schneider anotengesa kugadzirwa kweminda uye gadheni kune vese vatengesi nevatengesi.
Schneider Nursery, Inc.iri iri pa3066 East US 50, Seymour. 812.522.4068.